Version 0.2.7 – Iraniana “fifidianana”
Jona 19, 2009 amin'ny tolotra 5 Comments
Noho ny farany fifidianana Iraniana Google no nanampy Persiana fanohanana ny Google handika, Efa nanapa-kevitra ny hanaraka niantso ny Fiangonany. Raha tianao – izao ianao afaka manana ny WordPress nadika ho Farsi toerana na avy any Farsi. Fotsiny ny fitantanan-draharaha ary ampio io interface tsara fiteny, ny hoe tsotra. Tsy misy olon-kafa vaovao, nefa.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: dikanteny google, tsy ampy taona, fiteny maro, WordPress plugin
Jolay 1, 2009 amin'ny 8:12 am
Jolay 1, 2009 amin'ny 10:05 am
Misaotra ny fanehoan-kevitra, I’ll add this item to the FAQ.
mohammad hassan milaza
Jolay 15, 2009 amin'ny 11:19 am
Jolay 16, 2009 amin'ny 3:46 am
Jolay 17, 2009 amin'ny 9:59 aho